जीवनशैली – Butwal 24 News
हरेक वर्ष दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता पर्वलक्षित अफर ल्याउन नेपालका दुई ठुला दूरसञ्चार (टेलिकम्युनिकेशन) सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र आजियाटाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले नमस्ते र अजियाटाले एनसेल ब्राण्ड नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यो वर्ष पनि यी दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धी अफर ल्याएका छन् । सरकारी–सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको […]
काठमाडौँ। नेपालमा समेत उत्पादनको योजना सहित हाल भारतमा बन्दै गरेको विद्युतीय गाडी ट्राइटन हाल सम्म कै उच्च विशेषतायुक्त कारका रूपमा देखा परेको छ। ट्राइटनले भारतमा आफ्नो मोडेल एच इलेक्ट्रिक एसयूभी सार्वजनिक गरेको छ। यो इलेक्ट्रिक कारको विशेषता यो छ कि यो एक पटक फुल चार्जमा यसलाई १२०० किमीसम्म चलाउन सकिन्छ। पेट्रोल र डिजेलको बढ्दो मूल्यहरूको […]
October 15, 2021 October 15, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on फेसबुकले गर्‍यो ‘पोलिसी अपडेट’, होसियार ! तपाइ पनि कारबाहीमा पर्नु होला
काठमाडौँ। फेसबुकले अब यौन सामग्री पोस्ट गर्ने खाताहरू प्रतिबन्ध लगाउनेछ। कम्पनीले आफ्नो नीति अपडेट गर्दै यस्तो कदम चलेको हो। यस अन्तर्गत यदि कुनै प्रयोगकर्ताले सेलिब्रेटीहरु, राजनीतिज्ञहरू, क्रिकेटरहरू र पत्रकारहरू जस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूलाई निशाना बनायो भने उनीहरू विरुद्ध कारबाही गरिनेछ। फेसबुकका अनुसार यस्तो कारबाहीमा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत अकाउन्ट, पेज, ग्रुप वा पोस्ट सधैँको लागी हटाइनेछ। सोसल मिडियामा […]
October 15, 2021 October 15, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on महिला र पुरूषलाई किन दिइन्छ छुट्टा छुट्टै आर्शिवाद ?यस्तो छ पुरुष र महिलालाई दिने आर्शिवाद
काठमाडौँ । नेपालीहरूको महान चार्ड दशैमा नौ दिनसम्म पूजाअर्चना गरेको जमरा, दहि, रातो अविर, केरा र चामलसहितको समिश्रणबाट तयार पारीएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरीने टिकामा नै विजयादशमीको महत्व छ । परिवारका सबै सदस्य एकै ठाँउमा बसेर, घरमा नवदुर्गा भवानीको पूजा गरेर, उमेरक्रमानुसार ठूला अनि क्रमशः सानाहरुले टीका, जमरा र आर्शिवाद थाप्ने चलन छ । […]
बेवारिसे लास व्यवस्थापन तथा बेसाहाराको पुनर्जिवन केन्द्र अध्यक्ष तथा समाजसेवी विनय जंग बस्नेतले पूजा विश्वकर्मासँग लगन गाठो कसेका छन् । आज बुधबार बस्नेतले जातिय भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै अन्तरजाति विवाह गरेका हुन् ।विगत ९ वर्षदेखि निरन्तर बेवारिसे लास व्यवस्थापन तथा बेसाहाराको पुनर्जिवन संस्था चलाउदै आएका बस्नेतले पूजासँग विवाह बन्धनमा बाधिएको सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएका […]
पोखरा – मालेपाटनका सन्तोष सुनार (१५) शनिबार पोखरास्थित लेकसाइड फुटट्र्याकमा भेटिए । हातमा हरियो रंगको थर्मस, केही प्लास्टिकका गिलास पनि । दाहिने हात चल्न गाह्रो भएपनि उनी बिदाका बेला सधैं यसरी नै लेकसाइड पुग्छन् । फुटट्र्याकमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । आएका मान्छेलाई चिया बेच्छन्, उठेको पैसा लगेर आमालाई दिन्छन् । बाराही माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ७ मा […]
September 26, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on लसुन, प्याज काँचै खाएको राम्रो, यी हुन् स्वस्थ्य रहने पाँच टिप्स
१ .बिहान उठ्नेबित्तिकै शरीर तन्काउने व्यायामहरू गर्नुहोस् । यसले रक्तसञ्चार र पाचनलाई बलियो बनाउँछ र ढाडको समस्याबाट जोगाउँछ । २. बिहानीको खाना नछोड्नुस् । तपाईंलाई वजन घटाउनुछ भने उपयुक्त ब्रेकफास्ट महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्रेकफास्ट नखाने मान्छेले दिनभरिमा अरू धेरै खानेकुरा खाएर वजन बढाउँछन् । सन्तुलित ब्रेकफास्टमा ताजा फलफूल वा फलफूलको जुस, उच्च फाइबर भएको सिरियल, […]
ॐ भन्दामात्र ठिक हुने सात राेग
September 23, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on ॐ भन्दामात्र ठिक हुने सात राेग
हिन्दु धर्म ॐ लाई महामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित […]